Vakomana nematoyi! | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 24, 2006 Muvhuro, Nyamavhuvhu 24, 2009 Douglas Karr
Handina chokwadi kuti yakawanda sei yandinogona kutora! Internet Explorer 7, FIrefox 2, uye MacBook Pro zvese muvhiki rimwe chete. Ndiri kumashure pane angu RSS feeds nemazana mashoma ezvinyorwa, kuseri pane yangu email neanenge mazana maemail… uye ndine basa rakawanda kupfuura randati ndamboita. Chii chiri kuitika munyika?
Kutanga… Internet Explorer 7. Ndiri kufadzwa chaizvo nedzimwe nzira dzemenyu nenzvimbo dzescreen. Kana usati wambozviedza, iyo yakazara skrini inonakidza. Uye, hongu, kubaya kwakanaka.
Chechipiri… Firefox 2. Ini ndangoitora pasi. Chaizvo zippy! Ndozvifarira. Ini handina kuyedza kuperetera asi ini ndinonzwa icho chinhu chikuru. Izvi zvinoreva kuti ndinogona kurasa Google Toolbar.
Yetatu… drumroll ndapota… iyo MacBook Pro. Ini ndawana mabasa pane iyi mbwanana uye ndakanaka kufuratirwa kure neiyo 'inotonhorera chinhu'. Ehe, mushure mekunge ndaritenga, ndaifanira kuenda kunotenga bhegi idzva remalaptop raive rakanaka uye rakatsetseka. Ndichakamirira monster monitor kubasa… asi pasingasviki vhiki, ndave kutendeuka zvizere.
Ini ndakatakura Kufananidza pairi (WOW!) Kuti ndikwanise kumhanya XP pandinofanira kuita pane imwe skrini (kana muhwindo) uye OSX kune imwe. Izvo zvinongondibhowa. Handifunge kuti ndichave Windows Chirema kwenguva refu. Ini ndinofanira kukuudza iwe pachimiro uye nekunzwa, OSX iri kumberi zvakanyanya mukutaridzika, kunzwa uye kushanda. Ini handisi Apple snob (zvakadaro), asi ini ndinogona kuwana kuti ndive mumwe. Ini ndinofungidzira kekutanga nguva pandinoivhura yakavhurika kuBorder, ndichave mumwe chete!
Zvimwe zvinhu zvandisingade nezveMac? Tambo yemagineti tambo inotonhorera uye zvese, asi mumwe mugumo unoyamwa… ndiyo hombe simba rekupa magetsi. Uye ivo vakasimbisa zvakanyanya tambo yekuwedzera. Mazhinji dhizaini yetsoka shoma kudaro.
Iwo mashanu Anouraya Zvikanganiso zveChigadzirwa Management
Email 2.0 - Yakapfuma Internet Zvishandiso, Multimedia, yakadzika midzi?
Gumiguru 25, 2006 pa 6:53 AM
Kutanga katsi nembwa kugara pamwechete uye ikozvino Doug pane MAC?! Ngazvisadaro!
Zvinosekesa, nezuro graphic mugadziri wedu (MAC mukomana) uye Director wedu weInternet Services (PC mukomana) vakaziva kuti ivo hunyanzvi hwekutevedzera hupenyu. Yedu yehofisi kodhi yedhirezi yakashandurwa (pekupedzisira) kuti isu tisa FANELE kupfeka matai. Pazuva rekutanga remitemo mitsva, mukomana weMAC akauya kubasa asina tie, asi PC boy akapfeka tie zvakadaro. VAKAVA iyo Apple yekutengesa.
Kana ndangariro dzichishanda, Doug, unonzwa uchinyanya kukosha mune sutu. Saka izvi zvinobvunza mubvunzo, zviri nani here kunzwa uchikosha, kana kutonhorera?